Chautari Daily » आजपनि बढ्यो विदेशी मुद्राको भाउ, कुन देशको कति ?
आजपनि बढ्यो विदेशी मुद्राको भाउ, कुन देशको कति ?
काठमाडौं २२ साउन । आज (बुधबार) मलेसियन रिँगिटबाहेक सबै देशको भाउ उकालो लागेको छ । केही दिनदेखि निरन्तर बढीरहेको अमेरिकी डलरसहित प्राय सबै देशको भाउ आज पनि उकालो लागेको हो । आज अमेरीकी डलर एकको खरिददर ११३ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्रीदर ११३ रुपैयाँ ६० पैसा रहेको छ।
त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १३७ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रिदर १३८ रुपैयाँ ३८ पैसा रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ १३ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ २९ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ३ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ १९ पैसा रहेको छ। युएई दिराम एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ७६ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ९३ पैसा रहेको छ। मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २६ रुपैयाँ ९६ पैसा, बिक्रिदर २७ रुपैयाँ १० पैसा रहेको छ।
त्यस्तैगरी कुवेती दिनार एकको खरिददर ३७१ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३७३ रुपैयाँ ४५ पैसा रहेको छ। बहराईन दिनार एकको खरिददर २९९ रुपैयाँ ७५ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३०१ रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको छ।
प्रकाशित मिति २२ श्रावण २०७६, बुधबार ०४:४०